Isbadal lagu sameeyay waxaaha amniga ee magaalada Muqdisho – Bandhiga
Isbadal lagu sameeyay waxaaha amniga ee magaalada Muqdisho
Qaar ka tirsan saraakiisha booliska iyo taliyayaasha ciidamada gobolka Banaadir ayaa isbedel lagu sameeyay wixii ka dambeeyay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee jimcihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho.
Taliska Ciidanka Booliska gobolka Banaadir oo Isbedelkan cusub sameeyay ayaa taliyayaal cusub u magacaabay saldhigyadda degmooyinka Yaaqshiid, Dharkiinley,Hawlwadaag iyo Heliwaa oo kawada gobolka waxaana xilalka laga xayuubay taliyayaashii hore.
Sarkaal lagu magacaabo Xundubey ayaa sidoo kale loo magacaabay Taliyaha qaybta galbeed ee Booliska iyadoona xilkii laga qaaday Qaasim Axmed Rooble oo xilkan horey u hayay.
sbedelkan ayaa kusoo beegmaya xili shalay uu madaxweyne Maxamed Cabdulaahi farmajo uu kulan deg deg ah la yeeshay taliyayaasha kala duwan ee ciidamada kulankaas oo lagu adkeeyay muhiimada ay leedahay In la adkeeyo amaanka guud ee magaalada Muqdisho.
Su’aasha isweydiinta mudan ayaa ah markasta oo ay qaraxyo iyo weeraro dhacaan waxa kusoo beega in xilalka laga xayuubiyo saraakiil iyo taliyayaal ciidan kuwaasoo laga yaabo in qaarkood ay xilalka hayaan wax ka yar bilo hase ahaate arintan xil ka xayuubinta ayaa dowladu waxa ay u aragtaa isla xisaabtan iyo xalka kaliya ee lagu keeni karo jawi amni oo xasiloon.